Global Voices teny Malagasy » ‘Ikala Serfa: Amboara Iray Voafantina’ Manazava ny Herisetra Manjo Ireo Vehivavy Teratany ao Amerika Avaratra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Oktobra 2017 5:18 GMT 1	 · Mpanoratra Andrea Chong Bras Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Amerika Avaratra, Mediam-bahoaka, Teratany, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
“Ikala Serfa: Amboara iray voafantina” asakanton'i Weshoyot Alvitre . Fampiasàna nahazoana alàlana.
Mora iharan'ny herisetra loatra ireo vehivavy teratany manerana an'i Amerika Avaratra. Araka ny voalazan'ny Indian Law Resource Center , manana ny foibeny any Etazonia, “vehivavy teratany iray amin'ny telo no efa niharan'ny fanolànana teo amin'ny fiainany, ary telo amin'ny dimy no efa niharan'ny daroka ara-batàna. Avo roa heny ny vintana mety hisotasotàna amin'ireo vehivavy teratany raha miohatra amin'ireo vehivavy hafa ary, ny tena ratsy indrindra, avo folo heny ny salanisan'ireo vehivavy teratany maty nisy namono nanerana ny firenena.”
Henjana ny antontanisa, tahaka ny fahanginana izay matetika manodidina ireo olana manjo ny vehivavy teratany rahateo. Ho setriny, miasa manisy endrika ireny tarehimarika ireny ireo vehivavy teratany mpanakanto sy mpanoratra. Ohatra iray amin'izany ilay hivoaka tsy ho ela “Ikala Serfa: Amboara iray Voafantina ,” nifantenana ireo tantara voaravaka sary iresahana ny herisetra ary hanomezana voninahitra ny tanjaka sy ny fiaretan'ireo vehivavy teratany.
Endrika miverimberina any anatin'ireo fombandrazana isankarazany manerana an'i Amerika Avaratra i “Ikala Serfa”. Na maka endrika maro samihafa aza ny tantarany, any anatin'reo dika marobe ” Ikala Serfa  “ dia olona matanjaka, ara-panahy natao hampahatsiahy antsika (Olon'ny Famoronana) ny andraikitsika, hikolokolo ny afo tsy ho faty, ary hitandro ireo hery matanjaka izay efa nisy mihoatra lavitra noho ny toerana onenana.”
Ny hevitra niaingàna nahateraka ilay amboara dia avy amin'ny fahombiazan'ny tantara an-tsarin'ilay mpanakanto sady mpanoratra, Elizabeth LaPensée, “Ikala Serfa: Hajia Iray Voasokitra ,” natontan'ny Native Realities Press tamin'ny 2015. Asongadin'izy io ny vehivavy iray tafarina avy amin'ny herisetra ara-nofo navadiny ho lasa maherifo toa an'i Ikala Serfa ary namely izay rehetra mety ho mpanafika. Na dia tantara an-tsary aza, ny sary voarakitra ao anatiny dia afaka hampiasa saina satria maneho ny zavamisy matroka iainan'ireo vehivavy any anaty vondrom-piarahamonina Teratany. Ahitàna fomba fiarovantena ihany koa ao anatin'ilay tantara an-tsary, teknika avy amin'ny Arming Sisters Reawakening Warriors  (Rahavavy Miantafika Mamoha ny Mpiady), fikambanana iray izay mampiroborobo ny velontena sy ny fiarovantena ho fitaovana mankamin'ny fahasitranana.
Araka ny voalazan'i Lee Francis , mpanorina ny Native Realities Press, ny dika malalaka amin'ilay boky tantaran'i LaPensée, azo alaina ao amin'ny tranonkalan-dry zareo, no boky be mpitroka indrindra tao amin'ilay tranonkala.
Mba hamoronana ilay amboara, nitambatr'i Elizabeth LaPensée  tamin'ny an'ilay mpankanto Weshoyot Alvitre  ny heriny, ary niantso mpanakanto sy mpanoratra izy roa mba hizara ireo tantara, aingam-panahy avy amin’ Ikala Serfa. Notohanan'ny fanentanana Kickstarter  ny ezak'izy ireo, izay nahazoana maherin'ny $18,000.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/10/04/108231/
 Ikala Serfa: Amboara iray Voafantina: https://www.kickstarter.com/projects/1532301108/deer-woman-an-anthology
 Ikala Serfa: https://www.kickstarter.com/projects/1532301108/deer-woman-an-anthology/description
 Ikala Serfa: Hajia Iray Voasokitra: https://www.nativerealities.com/products/deer-woman-a-vignette